हाम्रोबारे – Health Post Nepal
स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने, स्वास्थ्योपचारका सन्दर्भमा नागरिकले जानकारी पाउने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिनेजस्ता हक सुनिश्चित गरिएका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्यसँग जोडिएका पोषण, खाद्य गुणस्तर, पानीको गुणस्तर, स्वच्छ वातावरण र सुरक्षित आवासलाई पनि नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ ।
स्वास्थ्यको अधिकार केवल स्वस्थ रहनु, रोग नलाग्नु वा बिसन्चो नहुनु मात्र होइन, बरु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा राम्रो अवस्था हो भन्ने मान्यतालाई संविधानले पहिलोपटक स्पष्टसँग लिपिबद्ध गरेको छ । स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुन खाद्य र पोषण, आवास, स्वच्छ पिउनेपानी तथा उचित सरसफाइ, स्वस्थ र सुरक्षित कार्यस्थल एवं स्वस्थकर वातावरण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
संविधानले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन आगामी असोज ३ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहको अधिकार सूची संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख छ र आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखी स्वास्थ्यलाई तीनवटै सरकारको अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणकै क्रममा रहेकाले धेरै विषयहरू क्रमशः स्पष्ट हुँदै जालान् । तर, केही विषय भने अहिले नै स्पष्ट भइसकेका छन् । नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा आमनागरिकको पहुँच पुर्याउन अझै धेरै गर्न बाँकी छ । स्वस्थ जीवनयापनका लागि व्यक्तिमा जागरुकता हुनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै सेवामा गुणस्तरको पनि छ । यी दुवै पक्षमा राज्य प्रवेश नै गरेको छैन भन्दा अन्यथा नहोला ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिरहँदा आमनागरिकले अहिले पनि स्वास्थ्य सेवामा हुने खर्चको झन्डै ५६ प्रतिशत खर्च खल्तीबाटै बेहोर्नुपरिरहेको छ । यी विषयहरूले के देखाउँछन् भने स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा अझै हामीले थुप्रै बहस–पैरवी, अभियान, खबरदारी गर्न बाँकी छ । बलियो स्वास्थ्य प्रणालीविना नागरिक स्वस्थ बन्दैनन् र स्वस्थ नागरिकविना स्वस्थ र समृद्ध समाज बनाउने सपना पूरा हुनै सक्दैन । यी तथ्य र सन्दर्भलाई हृदयंगम गरेर हामी बलियो जनस्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा खबरदारी गर्दै जनस्वास्थ्यको पहरेदारी गर्ने एउटा सानो जमर्को गर्दै छौँ ।
पछिल्ला दिनमा लोकप्रिय बन्दै गएको अनलाइनमार्फत हामी बहस–पैरवीको यात्रामा होमिँदै छौँ । हाम्रो बुझाइमा जनताका आवश्यकतालाई राज्यका नीति र कार्यक्रममा प्रतिविम्बित गर्न र ती विषयमा नागरिकलाई जागरुक बनाउन सञ्चारभन्दा सहज र सशक्त अर्को माध्यम छैन । त्यही तथ्यबोध गरेर स्वास्थ्य सञ्चार प्रालिको प्रकाशनमा हामी ‘हेल्थपोस्टनेपालडटकम’ अनलाइनमार्फत नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषाको माध्यमबाट तपाईं पाठकसमक्ष जोडिँदै छौँ । स्वास्थ्यसम्बन्धी आमनागरिकका जिज्ञासा, समस्या, आवश्यकता र तिनको समाधान नै हाम्रा प्राथमिकता हुन् । सूचना, शिक्षा र जानकारीवर्धक सामग्रीमार्फत हामी तपाईंको स्वास्थ्यसम्बन्धी चासोको हरसम्भव हल खोज्न निरन्तर प्रयत्नशील रहने प्रण गर्दछौँ ।
‘सरकारलाई खबरदारी, जनतालाई जानकारी’ नै हाम्रो मूल मन्त्र हो । स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, स्वस्थ जीवनशैली निर्माणदेखि पहुँचमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था निर्माणमा सञ्चारमाध्यमबाट लागिरहनु हाम्रो पहिलो धर्म हुनेछ ।
स्वास्थ्यलाई ‘पोलिसी र पोलिटिक्स’को केन्द्रविन्दुमा राख्ने अवस्था सिर्जनाका लागि निरन्तर बहसलाई अगाडि बढाउनु हामीले कर्तव्य सम्झेका छौँ । पत्रकारिताका मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तमा हामी कतै पनि, कत्ति पनि विचलित हुनेछैनौँ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमाथिको निरन्तर खबरदारीले सरकारलाई नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न दबाब पुग्ने मात्र नभई सेवाप्रदायकलाई समेत त्यसप्रतिको तत्परता बढाउँदै लानेछ, जनतालाई जागरुक बनाउनेछ, अनि प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ । जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने दलगत हस्तक्षेपविरुद्ध हामी निरन्तर आवाज उठाइरहनेछौँ ।
पछिल्ला दिनमा चिकित्सा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच विश्वासमा संकट देखापरेको छ । यी दुईबीचको दूरी घटेर विश्वास नबढ्दासम्म स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुनै सक्दैन । यसका लागि मिडियाले निर्वाह गर्न सक्ने माध्यमको भूमिकामा हामी लागिरहनेछौँ । स्वास्थ्य सेवाको समग्र गुणस्तर उत्पादित जनशक्तिमा निर्भर हुन्छ । त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नु भनेको मुहान नै सफा गर्नु हो । यो विषय हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।
समग्रमा हाम्रो अभियान वा उपस्थिति आमनागरिकमा स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धिका लागि हो । अझै पनि नीतिनिर्माताले स्वास्थ्यको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी क्षेत्र वा दायित्व हो भन्ने रूपमा बुझेको अभास हुन्छ । तीबाहेक धेरै मन्त्रालय वा स्थानीय सरकारका जिम्मेवारीभित्रका वातावरण, खानेपानी, कृषि, सरसफाइ, सडक, खाद्यान्नका विषयले स्वस्थ्यमा ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन् । यी विषय मृत्यु र बिरामीका कारक हुन् जसबारे हामी कम चासो राख्ने गर्छौं । यी सबैको केन्द्रमा स्वास्थ्यलाई नराख्दासम्म स्वस्थ समाजको कल्पना कोरा मात्रै बन्छ ।
स्वास्थ्यलाई ‘पोलिसी र पोलिटिक्स’को केन्द्रविन्दुमा राख्ने अवस्था सिर्जनाका लागि निरन्तर बहसलाई अगाडि बढाउनु हामीले कर्तव्य सम्झेका छौँ । पत्रकारिताका मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तमा हामी कतै पनि, कत्ति पनि विचलित हुनेछैनौँ । कुनै पनि सर्तमा विकृति, विसंगतिप्रति हामी न आँखा चिम्लिन्छौँ न मौन बस्छौँ । यो यात्रामा लम्किरहँदा राज्यको कानुन, नीति, नियम, पत्रकारिताधर्म तथा आचारसंहिताको परिपालनमा रत्तिभर विचलित हुनेछैनौँ । यो हाम्रो संकल्प हुनेछ ।
अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मिडियाकै अभाव छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन । तर, हाम्रो उपस्थितिलाई कसरी पृथक् र सार्थक बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु छ । निश्चय नै सत्मार्गको यात्रा उकालो छ, बाटो अप्ठ्यारो छ, तर त्यही यात्राबाट पुगिने गन्तव्य नै सुखद हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यो यात्रा तपाईं पाठक, जनप्रतिनिधि, प्रशासक, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विज्ञापनदाता, नीतिनिर्माता र आमसरोकारवालाको सार्थक सहयोगविना सम्भव हुँदैन । यी र यस्ता अनेक सन्दर्भमा हामी तपाईंहरूबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।
हामीप्रति सदाशय मात्र होइन, सत्मार्गको यात्रामा हामीलाई थकानको आभास हुँदा खबरदारी गर्ने, ऊर्जा भर्ने, अनि उत्प्रेरित गर्ने कर्तव्य पनि तपाईं पाठकहरूकै हो ।
बिहिबार ६१ हजार ७२५ सक्रिय संक्रमित, ३९ को निधन
स्वास्थ्यकर्मीका लागि जागिरको अवसर
के झलनाथ खनाल मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न गएका हुन्? यसो भन्छन् उपचारमा संलग्न चिकित्सक
जनकपुरमा सय बेडको कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा
बी पि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित
महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकले १७ अर्ब ५५ करोड उपलब्ध गराउने
Must Read सबै
हतारमा हामी, कतै मानसिक समस्यालाई निम्तो दिइरहेका त छैनौं ?
स्वास्थ्य तथ्याङ्कको गुणस्तरका लागि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डिङ